Dad badan ayaa weli door bidaan fariimaha qoraalka ah sida habka ugu fiican ee aad ula xiriirto dadka kale. Waa hagaag, iyagu waa deg deg ah oo lagu kalsoonaan karo. Waxaad noqon kartaa inta badan la hubo in fariinta ay gaari doonto qaataha. Xitaa haddii ay telefoonka damiso ama meelaha caymiska, adiga oo farriin loo soo diri doonaa iyaga sida ugu dhaqsiyaha badan ay dib ugu heli signalka. Oo wakhti badan, waxa aannu ku samayn waa, farriin u dirto qof gaar ah, laakiin waqtiyada waa sahlan in la shaqeeyaan kooxaha. Tusaale ahaan, haddii aad qorshaynaysid inay ku tuuraan qado ama xisbi oo aad rabto in aad muujiso in saaxiibbadaa oo dhanba, oo aad kaliya fariin koox dadka oo dhan kuwa soo diri kartaa mar halkii ay mid mid u diraya fariimo ama u malaynaya inaad kaliya dib ugu yimid ka filim oo aad rabto in aad u sheegto oo dhan saaxiibada aad ku saabsan, oo dhan ee aad u baahan tahay inaad samayso waa koox text fariimo iyaga oo sameeyey! Marka fariin isku mid ah ayaa si dhakhso ah loo baahin dad badan, diraya sms group runtii waa habka ugu wanaagsan oo ugu hufan iyo qaababka badan telefoonada smart iyo barnaamijyadooda badan oo Fariin group text heli karo maanta, waxa run ahaantii waa mid aad u fudud hadda u leedahay in chat leh dadka duwan ee hal mar.
Group Fariin ku iPhone
Group Fariin ku Android
Group Fariin Apps
Qoraalka Group la iPhone waa quruxsan fudud badan oo halkan sida loo sameeyo teedu
Talaabada 1: First of dhan, u furan Message ka ​​dibna garaac koobanahay New Message Icon.
Talaabada 2: Hadda qor ah taleefan lambarrada ama email-id dadka aad u tegaysid oo aad rabto in aad farriin loo dirayo.
Talaabada 3: Hadda, ku qor fariin ah in aad rabto in aad soo diray oo kaliya ka jaftaa ku soo .
Taasi oo dhan aad u baahan tahay in la sameeyo iyo fariinta kooxda loo soo diray!
Hadda, marka uu qof u jawaabi doonaa in farriin, ma heli doontaa fariin qof kasta laakiin jawaabta la soo bandhigi doonaa in thread this.
Trending kale ugu yahay habka ugu habboon in baaq loo diro koox iPhone waa in la isticmaalo icloud-
Talaabada 1: Waxaad u baahan doontaa inaad gasho on galay www.icloud.com iyadoo la kaashanayo ID Apple aad.
Talaabada 2: Hadda riix kaliya ku icon Xiriirada, ka dibna riix icon + kaas oo noqon doona meesha ugu hooseysa. Hadda, menu soo arbushin doonaa oo halkaas ka, dooro New Group.
Talaabada 3: magac gala koox cusub oo markaas ka jaftaa sanduuqan ka baxsan iyo magaca waa la badbaadin doonaa!
Talaabada 4: Hadda waxa aad u baahan tahay in ay galaan xiriirada in koox cusub oo loogu talagalay in, guji All group Xiriirada raadi qofka ugu horreeya oo aad doonayso inaad ku darto ama isticmaal bar raadinta inay tan sameeyaan.
Talaabada 5: Hadda, ay magaca Jiida Jaximo ka badan koox cusub oo kaliya hoos halkaas oo xiriir waxaa lagu dari doonaa group-ka.
Talaabada 6: Waxaad ku dari kartaa xiriirada badan ku cel-tallaabo ee kor ku xusan. Waxaad in badan 1 koox ku dari kartaa magacyada iyo haa tahay, waxaad samayn kartaa kooxaha sida ugu badan aad rabto.
Tallaabo 7: Hadda abuurtaan app xiriirka ee ku yaalla iPhone iyo marka aad ka jaftaa kooxaha, waxaad ka heli doontaa kooxda cusub waxaa.
Hadda, bal aynu eegno sida aan ka Android Phones diri kartaa fariimaha group.
Talaabada 1: Waxaad bilaabi doonaa iyada oo la samaynaayo group default ah in baaq loo diro. Just tagaan si ay screen guriga ka dibna garaac Xiriirada icon.
Talaabada 2: Hadda sare ee shaashadda, guji icon Kooxaha ka. Dhamaan telefoonada duwan doonaa halkan. Waxaa laga yaabaa inaad ku xerooyinka dar Groups icon ama tubbada button Menu on si loo helo doorasho Groups.
Talaabada 3: Halkan, ku qor magaca koox iyo xusuustaa magacan dambe la isticmaalo ka dibna, garaac icon Save the oo lagu sameeyey!
Talaabada 4: Hadda, in lagu daro xiriirada in kooxdan, waxaa laga yaabaa in aad ku sawirnaa on kooxda in aad abuuray iyo in ka badan waxaa, waxaad dooran kartaa doorasho Add Contact ah. Waxaad heli doontaa liiska xiriirada aad ka dibna, waxaad dooran kartaa dadka oo dhan in aad rabto in aad ku dar.
Talaabada 5: Your group ayaa lagu abuuray iyo hadda kuu soo diri kartaa fariimaha group. Tag screen guriga iyo garaac app Quraanka. Tubada garoonka qaataha dooro icon Contact taas oo ku tusi doonaa xiriirada oo dhan oo laga bilaabo halkan, kaliya dooro kooxda in ay soo diraan fariin ah. Hadda, garaac icon samaysay iyo hadda waxaad bilaabi kartaa qoraal fariin ka dibna aad fariin ah in kooxda in soo diri karaa.
Hadda waxaad bilaabi kartaa diraya fariimo group!
Group-saddexaad Fariin Apps
Waxaa jira wax badan oo Chine xisbiga saddexaad sidoo kaas oo awood kuu soo diri farriimaha group aad Android / iphone. Qaar ka mid ah barnaamijyadooda inta badan la isticmaalo oo hufan ee Tenth
BBM haatan ma aha oo keli ah Blackberry dadka isticmaala telefoonka. Hadda, waxa aad sameyn kartaa isticmaalka app this in baaq loo diro koox aad ka Android ama iPhone. App Arintan waxay u sahlaysaa in aad in baaq loo diro kooxda, yeedhi xiriirada aad u chat ama wadaagaan info la badan isticmaala hal mar.
Fariin ku dhafnaa
Qaado sawir ah code bar saaxiibkaa ayaa si dhakhso leh iyagoo aad ku dartid BBM
Design interface New
Kartida aad u raad raac xiriirada liiska fog ama degaanka
Voice Notes mararka qaarkood ay ku guuldareysato inay soo diraan, haddii aan, heerka kala iibsiga aad u gaabis ah
Sawiro mararka qaarkood ay ku guuldareysato inay soo diraan, haddii aan, heerka kala iibsiga aad u gaabis ah
Waa in la badbaadiyey Sawiro aad Memory Device ama kaarka Media hore ka hor inta arkaysid
Updates Status ku eg tahay laba xadhig.
2. Google+ tagi
Iyadoo app this, waxaad ku diri kartaa fariimaha, emojis, iyo goobaha map inay saaxiibo mar. App Tani ayaa sidoo kale aad u saamaxaaya in ay samayso wicitaan oo taleefan ah oo u celi si ay ugu noolaadaan video call oo leh dad badan, oo ku saabsan ilaa 10 qof.
Cross-Platform Fariin App
Wada hadaladii Synced
Google+ Account ayaa loo baahan yahay
No rasiidhada Read
Awoodid la'aan in la dhigay status
WeChat waa app kale oo weyn oo awood aad in baaq loo diro koox fariimaha qoraalka ah iyo cod iyo app this labadaba, aad xitaa ka heli kartaa saaxiibo cusub dhow!
Fariin cod Flawless
Audio farriimo / Video iyo codka calls
Doorasho chat Live ka dhigaysa wada hadalka soo nool leh dadka badan cod wada sheekeysanaya.
Xarumaha sida Chat Group, emoticons, stickers, sawirada diraya iwm
No status of "Online" ama "offline". Way adag tahay in sameeyo haddii user waa firfircoon ama uu tirtiray app ka isaga / iyada telefoonka.
Badanaa users Shiinaha, si ay haa tahay, caqabado xagga luuqadda ah.
> Resource > Android > siyaabo Best baaq loo diro koox la Android ama iPhone